ချေးငှားသူ သဘောတူညီမှု စာချုပ်။
Lendmo နှင့် ဆက်ဆံရေး
Third party များ
Article 1းအသုံးမပြုမီ သတိပြုပါ။
ချေးငွေစာချုပ်အရ၊ ချေးငှားသူနှင့် Lendmo ကြား ချေးငွေသဘောတူညီမူအား နားလည်ရမည်။ဤနေရာ၌ Lendmo website တွင် ချေးငှားသူဝန်ဆောင်မူ အသုံးပြုခြင်းကို Lendmo မှ လက်ခံရန် ရည်ညွန်းသည်။
ချေးငှားသူများသည် သဘောတူညီမူ စာချုပ်အား ဖတ်ရှုသိနားလည်ရမည်။Lendmo ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ချေးငှားသူများသည် သဘောတူညီမှုအားလုံးအား အလုံးစုံ နားလည် လက်ခံရမည်။
အထက်ပါ သဘောတူညီမူ ငါးချက်အတိုင်း၊ စာပိုဒ်အားလုံးသတ်မှတ်အကျုံးဝင်သည်။
Lendmo သည် မည်သည့်အချိန်တွင် သဘောတူညီမှုအား ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
သဘောတူညီမှု ပြင်ဆင်ခြင်းအား ချေးငှားသူထံသို့ ၁၄ရက်အတွင်း အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
ချေးငှားသူများမှ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများအား သဘောမတူညီပါက သတ်မှတ်ရက်စွဲမတိုင်မီ Lendmo သို့ အကြောင်းကြားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ တစုံတရာ အကြောင်းကြားမှု မရှိပါက ချေးငှားသူသည် ပြောင်းလဲမှုများအား လက်ခံသည် ဟု ယူဆမည်။
ချေးငှားသူထံမှ ကန့်ကွက်ချက်များအား Lendmo မှ လက်မခံပါက သဘောတူညီမူ သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုသဘောတူညီမှုများကို ၁၁ရက် ၅လ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။
Article2: Lendmo နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကြားဆက်နွယ်မှု
Lendmo ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Lendmo ၏လျှင်မြန်ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုသည်ချေးငွေလိုအပ်သူနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူကြား အချိန်တိုကာလအတွင်း ချေးငွေကို လူအများသို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံချေးယူသူ၏ ညွှန်းဆိုမှုအပေါ်မှုတည်၍ချေးငှားသူ ဂုဏ်သရေအား Lendmo မှ လက်ခံမည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍ
့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ တစ်ဦးစီအား ပီဆို ၄၀၀၀ မှ ၁၀၀၀ ထိ သေချာသော ချေးငွေပမဏ ချေးရန်အဖွဲ့အစည်းမှ ဆုံးဖြတ်မည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများမှ အတိုးနှုန်းအား ခံစားနိုင်သည်။
ချေးငှားသူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ချေးငှားသူတောင်းဆိုချက်အတိုင်း ချေးငွေအား ချေငှားမည့်သူကို တင်သွင်းနိုင်သည်။ချေးငှားသူမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအား မိတ်ဆက်၍ချေးငွေကို Lendmo မှ တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အပေါင်စာချုပ်အမျိုးအစား၊ လွတ်လပ်သော အပေါင်စာချုပ်အမျိုးအစား ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ( လူမှု့ကွန်ယက် သတင်းအချက်အလက်များ သူငယ်ချင်းနှင့် မိသားစု ကိုယ်ရေးအချက်များ)
Article 3: ချေးငွေအချက်အလက်များ
a) Each loan is worth from 35,000 - 700,000 MMK. Loans during 10-30 days.
တစ်လ အတိုးနှုန်း ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်။
c) LENDMO fee to connect the loan is 700ks/70,000ks/day.
အတိုးနှုန်နှင့် ချေးငွေ အခကြေးသည် အချိန်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ Lendmo သည် websiteမှ ၇ရက်မတိုင်မီ အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
၁၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသော အတိုးနှုန်းပေးချေခြင်းမှာ မိတ်ဆက်ကြေး၊ စီစဉ်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း နှင့် Article4 အရ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
ချေးငှားသူမှ ပေးချေရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်း၊ အကြွေးတိမ်းရှောင်ခြင်း များရှိခဲ့ပါက Lendmo ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ တာဝန်ရှိသူများသည် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်၍ third party များသို့ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်းများ ပြုမည်ဖြစ်သည်။
Article4: Third Party များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
Lendmo ၏စည်းမျဉ်းများအား လိုက်နာရမည်။
ချေးငွေ ကြေးအတွက် အတိုးနုန်းပေးရန် ရှင်းလင်းစွာသိရှိရန်။
ချေးငွေနှင့် ပြန်လည်ပေးခြင်များအား သင်ကြားပေးမည်။
အခကြေးငွေနှင့် ပက်သက်၍ ပေးချေရန် မေးမြန်းခြင်းမရှိရ။
ချေးငွေခွင့်ပြုမှုအတွက် Lendmo မှ ချေးငှားသူတောင်းဆိုချက်အတိုင်း လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအား ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
ချေးငှားသူမှ အချိန်မီ ပေးချေရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက Lendmo မှ လူမူကွန်ယက်၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အားဆက်သွယ်၍ ပေးချေရန် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ထပ်မံပျက်ကွက်ပါက ဖိလစ်ပိုင် ဥပဒေပရ တရားသူကြီးများနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူနှင့် Lendmo မှ third paarty များသို့ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဥပဒေအတိုင်း တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး Lendmo မှ သတင်းအချက်အလက်များအတိုင်း ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
ချေငွေအပေါ် အထင်မြင်မှားစေသော သတင်းအချက်အလက်မျာကို ချေးငှားသူမှ ပေးခဲ့ပါက Lendmo နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် နည်းလမ်းစည်းမျဉ်းများအရ လိမ်လည်မူအတွက် တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်သည်။
Lendmo၏ ဝန်ဆောင်မူ မရယူမီ သဘောတူညီမူများအား သေချာစွာဖတ်ပါ။
ချေးငှားသူမှ Lendmo Policy အတိုင်း စာချုပ်အားချိုးဖောက်ပါက Lendmo သည် ချေးငွေတောင်းဆိုမှု ပေးချေအတိုင်း personal informationများအသုံးပြုရန် သဘောတူသည်။
ပစ်ဒဏ်များအား သဘောတူ၍ Lendmo နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများမှ တာဝန်ရှိသည်အတိုင်း ချေးငွေကို နည်းလမ်းများအတိုင်းပြန်လည်ရယူမည်ဖြစ်သည်။
မိတ္တူကူးခွင့် မပြု။ Lendmo ၏ သဘောတူညီမှု့ ဆိုင်ရာများကို လိုက်နာပြီး မူပိုင်ခွင့် အား လေးစားရမည်။
Lendmo အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ချေးငှားသူသည် သူ သူမ၏ တာဝန်များကို လိုက်နာရမည်။ ချေးငှားသူသည် User Aggrement အတိုင်း Lendmo သည် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသည်။
Yay Kyaw street. Pazuntaung Tps yangon
နံနက် ၈း၃၀ မှ ညနေ ၆း၀၀ ထိ။ သီတင်းပတ်နှင့် အားလပ်ရပ်များ ပိတ်သည်။
© 2018 Copyright Lendmo Myanmar Copyright 2018. Alright reserved